Tummers: Laga bilaabo Shirkadda Dayactirka Yaryar ilaa Hogaamiyaha Caalamiga ah - Wargeyska Nidaamka Baradhada
в Sheekada Guusha, News
Waxaa la aasaasay 1976 Nederlaan, guusha Tummers Solutions Processing Food waxay ku salaysan tahay adeegga macaamiisha. In ka badan 40 sano waxaan isku darsanay tignoolajiyada ugu dambeeyay si aan u abuurno xalal wax ku ool ah oo baradho lagu kalsoonaan karo. Shirkadda injineernimada ee Nederland waxay hadda siisaa mashiinnada kelida ah iyo khadadka farsamaynta oo dhammaystiran kuwa soo saara cuntada ee adduunka oo dhan.
Tummers-ka ay qoysku leeyihiin waxay bilaabeen hawlgallada 1976-kii iyagoo ah warshad injineernimo iyo lammaane dayactirka qalabka ee warshadaha baradhada ee kobcaya ee gobolka Zeeland ee Nederlaan. Tan iyo markaas, shirkaddu waxay u horumarisay naqshadeeye sumcad leh iyo soo saaraha labadaba mishiinnada hal-abuurka ah iyo khadadka wax-soo-saarka oo dhammaystiran, iyo sidoo kale alaab-qeybiyaha adeegyada la xidhiidha warshadaha farsamaynta baradhada caalamiga ah.
Baahida warshadaha ee hufnaanta, joogtaynta iyo wax soo saarka waxay ka dhigan tahay Tummers' diiradda buuxda ee hal-abuurka. Sanado badan, waxaan helnay aqoon ballaaran oo baradho ah sida walxo ceeriin ah waxaanan helnay khibrad ballaaran oo ku saabsan abuurista habab habaysan oo hufan. Tan waxaa si cad loogu arki karaa noocyada kala duwan ee qalabkayaga, halkaas oo aad ka heli karto ma aha oo kaliya xalalka dhaqidda, nadiifinta, jarida iyo qalajinta. Iyadoo tobanaan sano oo waayo-aragnimo ah u leh habaynta baradhada, Tummers ayaa maanta ah hogaamiyaha adduunka ee khadadka dhamaystiran ee shiilan Faransiiska iyo maraqa baradhada.
Tummers Solutions Processing Food waxay samaysay qalajiyihii ugu horreeyay ee durbaanka 1982, iyada oo adeegsanaysa aqoonteeda habka wax soo saarka cuntada iyo qalabka. Sannadkii 2003, Tummers waxay heshay Simon Dryers, soo saaraha qalabka qallajinta ee fadhigiisu yahay UK. Aqoonta uu aasaasaha shirkaddan, Richard Simon, urursaday sannadihii la soo dhaafay ayaa u oggolaatay Tummers Solutions Processing Food in ay noqoto mid sii kordheysa oo ku takhasustay naqshadeynta iyo soo saarista qalabka wax soo saarka ee baradhada. Si joogto ah u daraasaynta baahiyaha soo-saareyaasha baradhada iyo hirgelinta hal-abuurradii ugu dambaysay, Tummers waxa ay noqotay hoggaamiyaha adduunka ee soo saarista maraqa baradhada oo tayo sare leh.
Tummers Solutions Processing Food waxay markii ugu horreysay soo gashay suuqa Ruushka 90-meeyadii, markii ay dhammaysay codsigeedii ugu horreeyay ee dib-u-eegista qalabka macmiilka Ruushka. Sannadihii xigay, shirkadda injineernimada ee Nederland waxay sii waday sahaminta suuqa Ruushka ilaa ay ka furtay xafiiskeeda iibka ee Ruushka 2008. Hababka Tummers LLC waxay dardargeliyaan isdhexgalka u dhexeeya Tummers iyo macaamiisha Ruushka, iyadoo la siinayo faham qoto dheer oo ku saabsan suuqa Bariga Yurub.
Jiilka cusub ee durbaanka qalajiyaha
Isla sanadkaas, markii xafiiska iibka ee Ruushka la furay, Tummers waxay gaarsiisay Ruushka khadkeedii ugu horreeyay ee dhameystiran ee wax soo saarka baradhada oo awood u leh 550 kg / h oo leh hal durbaan qalajiye 2 × 5,20 m. Waxaan bixinaa qalajiyaha durbaanka awoodo kala duwan. Sannadkii hore, qalajiyaha durbaanka ayaa la sameeyay oo leh dusha qalajinta ugu weyn ee abid la dhiso. Mashiinkan weyn, oo cabbiraya qiyaastii 8 x 2 m, waxaa lagu dhisay dhammaan horumarradii iyo horumarradii ugu dambeeyay wuxuuna u oggolaanayaa soo saarayaasha flakes inay si weyn u kordhiyaan waxtarka dhirtooda.
Ballaarinta wax soo saarka
Marka lagu daro horumarinta qalajiyaha rotary-ga casriga ah, sannadkii hore Tummers Solutions Processing Foods ayaa sidoo kale bilaabay mashruuc balaadhinta hamiga ah kaas oo ka caawin doona shirkadu inay hubiso mustaqbal waara oo sidaas darteed ugu adeegto macaamiisheeda xitaa in ka badan. Mashruuca oo dhan ayaa la filayaa inuu qaato 1 ilaa 2 sano, iyadoo Tummers ay si dhab ah u qaadanayaan arrimaha sii jiritaan. Tusaale ahaan, 50 oo litir oo biyaha roobka ah ayaa loo dhisi doonaa si loogu tijaabiyo baabuurtooda, waxaana dhismaha laftiisa lagu qalabayn doonaa nidaamka xakamaynta cimilada.
ShareShare50Share35Si aad u soo diri
Ruushka, ma jirto meel lagu kaydiyo ilaa kala badh khudaarta la beeray